Econet Wireless declares a cash dividend of $10m – 263AfricaNews-Patrick_Manase
Econet Wireless Zimbabwe, a subsidiary of Econet Wireless International, is the first and largest mobile network services provider in Zimbabwe. The telecoms giant became popular with its products and services such as Buddie. It has established branches in different corners … Read More
EcoCash is a mobile money transfer facility which is run by Econet Wireless Zimbabwe. The facility has grown in leaps and bounds since its inception and is arguably the largest mobile money transfer agent considering the huge sums of transactions … Read More
The Republic of Zimbabwe is a country located in the Southern Africa region. Its capital city is Has capital::Harare and the country has provinces. Zimbabwe is 390,580 sq km and is bordered on all sides by other countries (Zambia in … Read More
← PICTURES: ‘Ndebele king’ coronation goes ahead in private
Mzilikazi coronated, ready to announce King’s interim council →
Spike in prices… Election spending to get worse…. Bond notes make little impact
May 18, 2017 c263afri 0
June 19, 2017 c263afri 0